सभामुखविरुद्ध संसदमै एमालेको नाराबाजी - नेपाल एक्सन Online News Nepal
Homeदेशसभामुखविरुद्ध संसदमै एमालेको नाराबाजी
काठमाडौं । प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले सभामुखमाथि प्रश्न उठाउँदै प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध गरेको छ ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि आफूले जवाफ दिने बताए । आफूले प्रचलित कानुनका आधारमा निर्णय लिएको भन्दै उनले भने, ‘हाल यो विषय सम्मानित विचाराधीन छ । साथै संविधानले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा दुबै सदनमा छलफल गर्न बन्देज गरेको जानकारी गराउँछु ।’
उनी बोलिसक्दा नसक्दा एमाले सांसदहरुले वेल घेराउ गरेका छन् । उनीहरुले सभामुखको व्यवहार मुर्दावाद, सभामुखको आसनमा बसेर पार्टी फुटाउने षड्यन्त्र गर्न पाइँदैन’ जस्ता नारा लगाएका छन् ।
एमाले सांसदहरुको नाराबाजीपछि संसद बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको छ ।
Previous articleअशान्त किन छ काबुल ? तालिवानमा जारी संघर्स कहिले शान्त हुने
Next article‘चिकित्सकले कस्तो औषधि दिदैछन् भनेर बिरामीले सोध्नुपर्छ’– डा. लोचन कार्की